Wikipedia:Mpikambana rôbô - Wikipedia
Ny mpikambana atao hoe rôbô (bot) dia sata manokana omena an'ireo kaontim-pikambana izay ampiasain'ny Rindrankajy. Olon-tsotra izay manana satam-pikambana mahay mampiasa rindrankajy fibaikoana no mampandeha ireo rôbô ireo, ary azy irery izay kaonty rôbô ampiasainy izay.
Ny asa ataon'ny mpikambana manana sata rôbô dia manao asa fanampiana rohy interwiki eto amin'i Wikipedia malagasy ohatry ny any amin'ny Wikipedia hafa. Misy koa ireo atao hoe rôbô interwiki, izay manana asa manampy interwiki ary interwiki ihany : tsy manao asa afa-tsy izay.
Rôbô miasa eto amin'i Wikipedia malagasy
Tokana ihany aloha izao ireo rôbô miasa eto amin'i Wikipedia amin'ny teny malagasy, ary i Bot-Jagwar no anaram-pikambany. I Jagwar no mampandeha azy eto amin'ny Wikipedia.
Ny antony tsy ahitana ny fanovana ataon'ny rôbô ao amin'ny lisitry ny fanovana farany dia izy ireo manana ny sata rôbô, izany hoe voasitrika ny fanovana ataony raha araka ny parametatra tsotra. Raha te-hahita ireo fanovana ataon'ny rôbô dia mila tsindriana fotsiny ilay soratra "Asehoy ny mpikambana rôbô".
Rindrankajy mampandefa rôbô
Ireo rindrankajy ampiasaina indrindra amin'ny fampandefasana rôbô dia Pywikipedia. Jereo ny fanoroana mahakasika an'i Pywikipedia ho an'ny fampahalalana fanampiny.
Ny hataka mahakasika ny rôbô dia tokony atao eto amin'ny Wikipedia:Bots/bot flag requests.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Mpikambana_rôbô&oldid=175520"
Dernière modification le 21 Jiona 2011, à 18:16
Voaova farany tamin'ny 21 Jiona 2011 amin'ny 18:16 ity pejy ity.